တနင်္ဂနွေ သား/သမီး ဆိုသည်မှာ…1 – Alanzayar
တနင်္ဂနွေ သား/သမီး ဆိုသည်မှာ…1
တနင်္ဂနွေ သား/သမီး ဆိုသည်မှာ
တနင်္ဂနွေ သား/သမီး ဆိုသည်မှာ လက်ဖွာသည် အသုံးအဖြုန်းမိုက်သည် / ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်အရာကို ထည့်မစဉ်းစားဘူး ထည့်လဲမတွက်ဘူး ထစ်ခနဲ့ဆို တခုခုကို လုပ်လိုက်ရမှ စိတ်ကျေနပ်ကြတာမျိုး …..
ဒါပေမဲ့ ပြောပီး လုပ်ပီးသွားရင်လဲ သူတို့မဟုတ်သလိုပဲ ပြန်ခေါ်ဖို့ ပြန်ပတ်သက်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး ….လူတစ်ယောက်ကို ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လဲ ….
အပေါ်ယံခင်မင်တာ မလိုချင်ကြဘူး သူငယ်ချင်း အစစ်ပဲ လိုချင်ကြတယ် ပြောရမယ်ဆိုရင် အိမ်အပေါ်မှာဆိုးသလောက်
သူငယ်ချင်းအပေါ် ဘေးသူစိမ်းအပေါ်ဆို ငွေအကုန်ကျခံပြီး ပေါင်းသင်းတတ်ကြတဲ့ နေ့နာမ်တွေပေါ့ ….သူ့ကိုယ် သွားတော့ မရွဲမတိုက်မိစေနဲ့ သူများတွေ ရွဲ့တာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြန်ရွဲ့တတ်တယ် ခနဲ့တတ်တယ် စကားနဲ့ မခံအောင်ပြန်ပက်တတ်တယ်
တော်ကီကတော့ သာလိကာ အရှုံးပေးရလောက်တဲ့ စွမ်းရည်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ် ….လူတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေရင် သနားအောင်ပြောလာရင် အိတ်ထဲရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလဲ မသုံးရ နေပါစေ ကူညီတတ်တယ်
အဲ့ဒီလူကို ကြည့်မရဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့လူဘာပဲဖြစ်နေနေ လှည့်ကိုမကြည့်ဘဲ ကျော်ခွသွားတတ်တယ် ……အကောင်းအရမ်း ကြိုက်တယ် အစားအသောက်ဖြစ်ဖြစ် အဝတ်အစားဖြစ်ဖြစ် စက်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီဆိုရင်လဲ နောက်ဆုံးပေါ်မှ သူများထက် သာနေမှ ……
လိမ်တာ ညာတာ အရမ်း မုန်းတယ် ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အပေါ်တော့ ဟာသတွေ ရယ်စရာတွေ အမြဲပြောတတ်ပြီး စနောက်တတ်ကြတာလဲ သူတို့ပါပဲ မျက်နှာရွှင်တယ် အပြုံးချိုတယ် လူချင်လူခင်လဲ အရမ်းပေါတယ် မဟုတ်တာ မမှန်တာကိုတော့ သူ့အပေါ်သွားမလုပ်မိစေနဲ့ နောက်အဲ့လိုလူမျိုး
တာ့တာပဲ သေတောင် မပေါင်းတော့ဘူး …..ဘာပဲ လုပ် လုပ် သူ့အတွက်ကျန်မှ လုပ်တတ်တယ် ဒါပေမဲ့ မထင်ရင် မထင်သလို ပိတ်သလေး နဘေးပစ်
ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကလဲရှိသေး ပြောရမယ်ဆို တနင်္ဂနွေတွေဟာ ဆတ်ဆတ်ထိ မခံတတ်ကြတဲ့
စွာတေးလန် (သို့မဟုတ်) ပေါက် ကွဲ လွယ်တတ်တဲ့ လောင် စာ ဆီလို သူတွေပေါ့ဗျာ …….. ။crd
တနင်ျဂနှေ သား/သမီး ဆိုသညျမှာ
တနင်ျဂနှေ သား/သမီး ဆိုသညျမှာ လကျဖှာသညျ အသုံးအဖွုနျးမိုကျသညျ / ဒေါသဖွဈလာရငျ ဘယျအရာကို ထညျ့မစဉျးစားဘူး ထညျ့လဲမတှကျဘူး ထဈခနဲ့ဆို တခုခုကို လုပျလိုကျရမှ စိတျကနြေပျကွတာမြိုး …..
ဒါပမေဲ့ ပွောပီး လုပျပီးသှားရငျလဲ သူတို့မဟုတျသလိုပဲ ပွနျချေါဖို့ ပွနျပတျသကျဖို့ ဝနျမလေးတတျကွဘူး ….လူတဈယောကျကို ပေါငျးမယျဆိုရငျလဲ ….
အပျေါယံခငျမငျတာ မလိုခငျြကွဘူး သူငယျခငျြး အစဈပဲ လိုခငျြကွတယျ ပွောရမယျဆိုရငျ အိမျအပျေါမှာဆိုးသလောကျ
သူငယျခငျြးအပျေါ ဘေးသူစိမျးအပျေါဆို ငှအေကုနျကခြံပွီး ပေါငျးသငျးတတျကွတဲ့ နနေ့ာမျတှပေေါ့ ….သူ့ကိုယျ သှားတော့ မရှဲမတိုကျမိစနေဲ့ သူမြားတှေ ရှဲ့တာထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ ပွနျရှဲ့တတျတယျ ခနဲ့တတျတယျ စကားနဲ့ မခံအောငျပွနျပကျတတျတယျ
တျောကီကတော့ သာလိကာ အရှုံးပေးရလောကျတဲ့ စှမျးရညျမြိုး ပိုငျဆိုငျထားကွတယျ ….လူတဈယောကျ ဒုက်ခရောကျနရေငျ သနားအောငျပွောလာရငျ အိတျထဲရှိတဲ့ ပိုကျဆံလဲ မသုံးရ နပေါစေ ကူညီတတျတယျ
အဲ့ဒီလူကို ကွညျ့မရဘူးဆိုရငျတော့ အဲ့လူဘာပဲဖွဈနနေေ လှညျ့ကိုမကွညျ့ဘဲ ကြျောခှသှားတတျတယျ ……အကောငျးအရမျး ကွိုကျတယျ အစားအသောကျဖွဈဖွဈ အဝတျအစားဖွဈဖွဈ စကျပစ်စညျးဖွဈဖွဈဝယျပွီဆိုရငျလဲ နောကျဆုံးပျေါမှ သူမြားထကျ သာနမှေ ……
လိမျတာ ညာတာ အရမျး မုနျးတယျ ဒါပမေဲ့ သူငယျခငျြးမြား အပျေါတော့ ဟာသတှေ ရယျစရာတှေ အမွဲပွောတတျပွီး စနောကျတတျကွတာလဲ သူတို့ပါပဲ
မကျြနှာရှငျတယျ အပွုံးခြိုတယျ လူခငျြလူခငျလဲ အရမျးပေါတယျ မဟုတျတာ မမှနျတာကိုတော့ သူ့အပျေါသှားမလုပျမိစနေဲ့ နောကျအဲ့လိုလူမြိုး
တာ့တာပဲ သတေောငျ မပေါငျးတော့ဘူး …..ဘာပဲ လုပျ လုပျ သူ့အတှကျကနျြမှ လုပျတတျတယျ ဒါပမေဲ့ မထငျရငျ မထငျသလို ပိတျသလေး နဘေးပဈ
ပွောတတျတဲ့ အကငျြ့ကလဲရှိသေး ပွောရမယျဆို တနင်ျဂနှတှေဟော ဆတျဆတျထိ မခံတတျကွတဲ့
စှာတေးလနျ (သို့မဟုတျ) ပေါကျ ကှဲ လှယျတတျတဲ့ လောငျ စာ ဆီလို သူတှပေေါ့ဗြာ …….. ။crd
၇ ရက် သားသမီးများအတွက် (၂၉. ၅ .၂၀၂၂) မှ (၄. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
Previous Article ကြောငျးထှကျပွီး ဖြားနတေဲ့မိခငျကို ထောကျပံ့ရနျ မီးသင်ျဂွိုဟျတဲ့အလုပျကို လုပျနရေတဲ့ ၁၁ နှဈအရှယျကောငျလေး
Next Article မနက်ဖန်မှာထွက်မယ့် ချဲဂဏန်း(3D) တစ်ကွက်ထဲအပိုင်အောဖို့ တင်ပေးလိုက်ပီနော် (ပေါက်ချင်သူများအတွက်)